मारुती सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ कार लन्च, कति छ सुरुआती मूल्य ? Bizshala -
मारुती सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ कार लन्च, कति छ सुरुआती मूल्य ?
काठमाण्डौ । मारुती सुजुकीले सोमबार भारतीय बजारमा आफ्नो नयाँ माइक्रो एसयूभी ह्याच ब्याक ‘एस–प्रेसो’ कार लन्च गरेको छ ।
‘एस–प्रेसो’ कारको अनुमानित मूल्य भारु ४ लाख (नेरु ६ लाख ४० हजार) भन्दा कम हुन सक्नेछ भने बढीमा भारु ६ लाख (नेरु ९ लाख ६० हजार) सम्म पर्न सक्ने बताइएको छ । कम्पनीले ‘एस प्रेसो’ कारको बिक्री आफ्नो मारुती सुजुकी एरिना डिलरसिपबाट गर्नेछ । भारतीय बजारमा यसको सामना रेनल्ड क्विड फेसलिस्टसँग हुने देखिन्छ ।
‘एस–प्रेसो’ इन्ट्री लेबल कार हो र यो ‘फ्युचर कन्सेप्ट एस’ कारमा आधारित छ । जसलाई २०१८ मा लन्च गरिएको थियो ।
मारुती सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ कारको हुडमा बीएस सिक्स १.० लिटर र ३ वटा पेट्रोल सिलेन्डर इन्जिन उपलब्ध हुनेछन् । यो ५ स्पिड म्यानुयल गिएर बक्स स्ट्यान्र्डडमा हुनेछन् । ‘एस–प्रेसो’ कारका केही भेरिएन्टमा अटोमेटेड म्यानुयल ट्रान्समिसन युनिट पनि समावेश हुनेछन् ।
‘एस–प्रेसो’ कारको इन्टेरिएरमा डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर उपलब्ध हुनेछन् र यसमा स्मार्ट प्ले स्टुडियो टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि हुनेछ । इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको तल हर्जाट लाइट तथा फ्रन्ट पावर विइन्डो कन्ट्रोल रहनेछ । यसका अलावा सेन्ट्रल कन्सोलको साइडमा एसी वेन्टस हुनेछ । त्यस्तै यसमा थ्री स्पोक मल्टीफङ्सन स्टियरिङ ह्विल समावेश हुनेछ । जसमा म्युजिक तथा कल कन्ट्रोल सिस्टम पनि रहनेछ ।
मारुती सुजुकी एस–प्रेसो कार नौवटा भेरिएन्टका साथमा चार ट्रिम लेबल, स्ट्यान्डर्ड एलएक्सआई, भीएक्सआई र भीएक्सआई प्लसमा उतारिनेछन् । यो अनुमान पनि लगाइँदैछ कि कम्पनीले अटोमेटिक ट्रान्समिसनको अप्सन यसको भीएक्सआई र भीएक्सआई ट्रिम प्लसमा उपलब्ध गराउनेछ । – एजेन्सी